Mullein - imbiza usizo nokwelashwa, futhi umbono omuhle. Lesi simila, sibonga izimbali elikhanyayo, ungakwazi ukuhlobisa flowerbeds. mullein Uhlobo lwe (Verbascum) libhekisela emkhayeni omkhulu figwort (Scrophulariaceae), okuyinto ngezici zawo zokwelapha ezaziwayo. Lokhu bohlobo kuhlanganisa mayelana 280 zinhlobo, okuyinto zasakazekela kulo lonke i-Eurasia yayigcwele, kodwa enkulu ngokwehlukahlukana kwabo kuzo eMedithera. Kuzo zonke izinhlobo le mullein ongajwayelekile kakhulu futhi ethandwa.
Mullein - ikhambi elithile ukuthi kalula zasakazekela County ngenxa omningi imbewu ngumoya. Lesi sitshalo kuba ezijwayele cishe wonke umuntu. Mullein kukhona yonyaka, biennial noma zisetshenziswa.
amahlamvu Simple eqoqwe rosette. Efihlekile kuncike ezihlukahlukene has a ucishe uvalwe phezu inflorescence spike. Izimbali at mullein ube Corolla ifomu emihlanu membered, avame ababethi umbala ophuzi, kodwa futhi, bangase babe mhlophe ngisho obomvu, kuncike ezihlukahlukene. Imiqumbe uvuthwe eziningi imbewu. Endle, batshala ngokwabo, ukwakha mullein esobala enokukhanya kwelanga lonke.
Okuvame kakhulu iyona mullein ezivamile. Liphinde edume ukubizwa ngokuthi indlebe bear sika. Futhi lena nje ekuqaleni uhlu olude amagama ehlukile isitshalo efanayo. Ekhulwini nesishiyagalolunye ke lalaziwa izinhlobo amadoda angaphezu kwamashumi amane mullein. I esimnandi kakhulu - ngesilevu hare Adamu induku ice ishidi. Ngenxa hairiness yayo ukhishwa njengoba amagama ezifana velvet, usithe yefulaneli, nabanye abaningi.
Lolu hlobo ngokungafani nezinye has izimbali ezincane. Mullein Yingakho ezejwayelekile ucingo melkotsvetkovym. Kuzinkomba European kubhekwa njengendlela mullein omkhulu, eNyakatho Melika - njengoba mullein plain. Lesi sitshalo kuyinto ewusizo kakhulu futhi singasho, abadumile. Mhlawumbe lena yiyona ndlela isizathu ezihlukahlukene okunjalo amagama.
Incazelo mullein ezivamile
Mullein - ngonyaka ezimbili isitshalo, herbaceous. Isiqu uqonde mullein nomunye amaqabunga amakhulu oblong.
Izimbali ukukhanya yellow umbala ziqoqwa spike inflorescence abade 1.6-1.8 cm. Luyaqhakaza ngo-June, izimbali ihlala lonke ihlobo kuze kuka-August. In imvelo zemvelo ezitholakala ku ihlathi imiphetho, glades, izimfunda, nemithambeka izigodi amanzi eduze.
Ukhula Othandweni endaweni
Mullein abavamile uthanda ilanga futhi kahle permeable umhlabathi, ngakho uma unquma "axazulule" endaweni yabo udokotela ngokwemvelo ke ukukhetha indawo libalele afanele kuye.
Ukuhlwanyela imbewu kungaba emathemini amathathu: ekuqaleni entwasahlobo, ehlobo futhi ekupheleni kuka-August. Noma we ezintathu ongakhetha mullein isikhathi yakha ngaphambi esidayisa abandayo. Uma nibulala isitshalo ngasekupheleni kwehlobo, lapho uphuma khona kuyoba ezincane, kodwa akusona isithiyo esijwayelekile ukuqhubeka.
imbewu mullein mancane, ngakho udinga ngibatshale okungenani linamathele emhlabathini, ukujula Kunconywa -. 1 cm Lungisa imbewu zokutshala akudingekile. Ukuze izithombo lihluma kunalokho, umbhede kufanele uyophuziswa, ikakhulukazi ehlobo kanye ngokungabi bikho imvula.
Izinsuku zokuqala amathathu izithombo ayakhula kancane kakhulu. Ukunakekela wabo ukususwa esifike ngesikhathi ukhula ziba ngcono inhlabathi. Kufanele kuqashelwe ukuze singathwesi yakha uqweqwe phezu. Uma izithombo kakhulu wafingqa, kufanele ifohle, kusale imitha elilodwa irowu izitshalo 14-18.
Kuyinto enhle kakhulu mullein ichaze kocingo, lapho uyovikelwa kusuka umoya ipheshulwa.
Ukusetshenziswa kanye nokulungisa isitshalo okwelapha
Mullein kubhekwa isitshalo zokuhlobisa ukuthi sibukeka sisihle ku imibhede, utshani, ekutshaleni esisodwa noma iqembu. Ngaphezu kwalokho, mullein - a okukhulu uju isitshalo. Kodwa ngaphezu kwakho konke ukuthi walwazisa ngokuba isitshalo okwelapha. Ngo Folk imithi, sisetshenziswa kabanzi, amaqabunga, izimbali kanye nezimpande.
Ukuqoqwa amakhambi okwelapha - a ezidingekayo futhi ewusizo. Kungcono uzilungiselele wena nomndeni wakho ikhambi lemvelo. Ukuze ukuqoqa kahle futhi mullein ezomile, kudingeka uqaphe kakhulu. Lapho lokuqoqa, omiswe bese isitoreji izimbali bangase balahlekelwe umbala yegolide, ngaleyo ndlela yokuzuza umbala onsundu ezingcolile. Kodwa lena akuyona inkinga eyinhloko, kubalulekile ukuthi, kanye nezimbali ezinhle anemibala ulahlekelwe okuningi ukuphulukisa yabo impahla.
Ukuze ugweme lokhu, ukuqoqa izinto zokusetshenziswa kwakudingeka ngasekupheleni ekuseni, lapho ilanga eyosula namazolo. Ngalesi sikhathi, kungenziwa ahlukaniswe kalula kusukela eziqhakaza efihlekile adherent kubo stamens. Uma ufuna ukulungisa amakhambi okwelapha, inkomishi ezinhle ezimibalabala, zama hhayi ukuthatha. Omiswe Kunconywa endaweni umoya. Izimbali omisiwe zigcinwa izigubhu uvalwe waqiniswa. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi wabuyela umswakama kusukela emoyeni.
Amathiphu ukulungiselela mullein izimbali:
Workpiece Kwenziwa phakathi no-July no-August.
Ukuqoqa Strand engamukeleki wilted ezimanzi emvuleni noma amazolo izimbali.
Mullein kubhekwa omisiwe lapho beaters babe ziyaqothuka, umbala ophuzi okusagolide, nge obucayi ukunambitheka lwamafinyila-amnandi kanye nephunga uju.
Amaqabunga neziqu Bavunwa ngendlela efanayo kuyo yonke ehlobo, izimpande futhi kudingeka ukuba zigcinelwe ekwindla. Ekhuluma ewukuhlakanipha okwenziwe odokotela ngemvelo umbel okwelapha ngisho mullein kahle kungase kutholakale. Awukwazi ukusebenzisa black namaphela mullein.
Ezinsukwini ubudala, ngisho e-Russia abangamaqaba, okhokho bethu wasebenzisa amandla okwelapha mullein. Futhi namhlanje, lesi sitshalo iye yasetshenziswa ngempumelelo abelaphi emazweni amaningi ukwelapha izifo. Lesi sitshalo has isinqandakuvunda, emollient, esigubuzele, expectorant, izenzo eqeda ukuvuvukala. Ukumnika of mullein izimbali Kunconywa ekwelapheni ukukhwehlela whooping, ukukhwehlela abandayo, hoarseness, inyumoniya, iphika, ukucinana kwemigudu yokuphefumula. Ngalo iboshiwe somoya kuhlasela kanye nokugoqana komzimba.
Zokupheka of imithi yendabuko
Ngo Folk imithi, zikhona izindlela eziningi usebenzisa mullein, ngosizo lwabo ungakwazi ukuqeda izifo eziningi. Ake ucabangele ezinye zazo.
5 g impahla eluhlaza ukugcwalisa nendebe amanzi abilayo futhi ukuyishiya bame amahora 2-3 ke ushise. Thatha tincture Kunconywa ngesimo ukushisa for isigamu sehora ngaphambi kokudla izikhathi 3 ngosuku 1/3 cup
Isipuni esisodwa impahla eluhlaza ukugcwalisa nendebe amanzi abilayo. Shiya sokunika imizuzu 20 ke ushise. Thatha elilodwa isipuni imizuzu 30 ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
Isipuni esisodwa impahla eluhlaza ukugcwalisa inkomishi eyodwa 40% utshwala noma vodka, sokunika ushiye endaweni emnyama amasonto amabili, khona-ke ushise. I ukumnika ukulungele isetshenziselwa sciatica, rheumatism nezifo ngokuhlanganyela.
Izimbali Kuphendula indlebe bear kuhlangene ukulandelana, airom, willow, sage, Thyme futhi esetshenziselwa zokugeza nge yamathambo ezinganeni.
Powder imibala wasebenzisa angawokuphulukisa amanxeba kanye waphuka ezisemagumbini emlonyeni futhi esifubeni we webele zesifazane. Oku-gcoba izindawo kuthinteka ne isanqante juice.
Wamafutha mullein imbali powder esetshenziselwa ukwelashwa amanxeba purulent kanye nezilonda.
mullein imbewu Wamafutha powder ibhalwe kanje. Hlanganisa 5 izingxenye imbewu powder kanye izingxenye 10 ibhotela. Isetshenziselwa ukwelapha izilonda namanxeba putrefactive.
Ungenza wokuthoba. 4 wezipuni amahlamvu noma izimbali uthele amanzi abilayo futhi isetshenziswa ezindaweni inkinga ngaphambilini zihambisana gauze.
amahlamvu Fresh zisetshenziswa izilonda, kanye nezilonda chiryam kanye namahlamvu omile, wagcoba lube impuphu wafafaza isilonda.
Mullein abavamile - isitshalo ezibalulekile kakhulu kwezokwelapha. izidakamizwa ngamunye has Izimo yayo, kodwa njengoba indlebe nebhere, Izimo atholakele. Kuyinto kudingekile kuphela, ukuthatha infusions of mullein, acabangele ukungabekezelelani siqu futhi ukuqinisekisa ukuthi kwakungekho ukusabela nomzimba.
US baseNtshonalanga ngokuthi mullein ngenxa hairiness yayo "toilet paper cowboy."
Mullein kusukela ezikhathini zasendulo kubhekwa isitshalo imilingo.
Ngokusho ezinganekwaneni, abathakathi esetshenziswa mullein ukulungiselela phisa uyathakatha sika.
Abanye abantu cabanga ukuthi mullein izidakamizwa kususa ukuthuka izigceme ukuxosha imimoya emibi.
Okhokho bethu, mullein Isiqu elicwiliswe resin wenza kusukela ithoshi lakhe, okuyinto ashisa isikhathi eside. Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi German Koenigskerze - a "ikhandlela bobukhosi '.
Mullen wakhonza ukudaya indwangu, futhi ngezinye izikhathi ngisho izinwele umbala. Izimbali athwale indlebe wanika umbala ophuzi noma oluhlaza.
Lamanzi esiphethu "Donat". lamanzi esiphethu "Donat Magnesium" - imiyalelo
Galangal - ukuthi iyini (isithombe)? Galangal (izimpande): izakhiwo zokwelapha
Aloe vera: izakhiwo ewusizo kanye contraindications sitshalo esimangalisayo
Izoso okumnandi ekhaya
Boris Strugatsky. I-Biography yomlobi ovelele wesayensi weqiniso
Samsung GE732KR: incazelo, imininingwane kanye nokubuyekezwa